Easy Jogger Pants (Stripe) forcategory_name
ှSocial network ကို အသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်ပါ။
Facebook ဖြင့် ၀င်သည်။
Google ဖြင့် ၀င်ရောက်ပါ။
သင် မေ့နေပါက စကားဝှက် ရေးပါ။?
Suppliers with Trade Assurance
Purchasing Agent Service
How to use TA to get full protection? What's TA?
K Myanmar Kyats
---1 to 50
---51 to 100
---101 to 150
---151 to 200
မိတ်ကပ် နှင့် ခရင်မ်
Nail Art ပစ္စည်းများ
ဖုန်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
၀င်ရန် | Join Free ကျွန်ုပ်၏ ProblemClean
ယခု ပဲ စတင်မှုကို ရယူပါ
၀င်ရန် (သို့) Join Free
I agree to Free Membership Agreement I agree to Receive Marketing Materials ကျွန်ုပ်၏ ProblemClean
အခွန် မပါဝင်သေး သောဈေးနုန်း
ကုန်ပစ္စည်း များကို သင့် ဈေးဝယ်လှည်း ထဲတွင် ပေါင်းထည့်ပြီးသွားပါပြီ။
0 items များ သင့် လှည်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ သင့် လှည်းထဲမှာ 1 item ရှိပါတယ်။
product များ စုစု​​​​​ပေါင်း (tax excl.)
စုစုပေါင်းသယ်ယူပိုဆောင်ခြင်း (tax excl.) စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားနိုင်ရန်
စုစုပေါင်း (tax excl.)
ဆက်လက် ဈေးဝယ်ရန် ငွေရှင်းရန်
ထုတ်ကုန်နှင့်ဖြန့်ဝေသူများ ရှာဖွေခြင်း ထုတ်ကုန်နှင့်ဖြန့်ဝေသူများ
Online မှ Order စီမံနိုင်ခြင်း Order စီမံနိုင်ခြင်း
ပြည့်စုံသော Order ထိန်းသိမ်းမှု Order ထိန်းသိမ်းမှု
Easy Jogger Pants (Stripe)
အခြေအနေ: product အသစ်
$27.00 tax excl.
Product အတွက် Order အနည်းဆုံး ၀ယ်ယူနိုင်သည့် အရေအတွက် 1
ကုန်ပစ္စည်းများကို Virtual coin များ နှင့် အတူ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်: 27 coins
လှည်း ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ရန်
 ဘေးဘက်တွင် ဇစ်ပါရှိပါတယ် ။
 ဘေးဘက်နှစ်ဘက်ဘက်တွင် အိပ်ကပ် 2ခုပါရှိပါတယ်။
 Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 (ဆိုဖာ, ဖိနပ်, အိတ်, ကားထိုင်ခုံစသည်တို့ကို) နဲ့ပေါင်းစပ်ကို၍ လျှာ်ခြင်းကို ရှာင်ကြဉ်ပါ။
 အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။
 အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 အနံပါဝင်သော အဖြူရောင်သီးသန့်အတွက်detergent အသုံးပြုပါက ပါဝင်သော detergentဆပ်ပြာရည်အတွင်းကြာရှည်စွာစိမ်မထားပါနှင့်။
 လျော်ဖွတ်ပြီးနောက် ပူလွန်းသောနေရောင်အောက်နှင့် အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
 ကျယ်လွယ်သော အဝတ်ဖြစ်ပါသဖြင့် ညှစ်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆန့်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 အစထုံးလေးများဖြစ်ပေါ်ပါက ကတ်ကြေးဖြင့်ညုပ်ထုတ်၍ရှင်းနိုင်ပါသည်။
Camisole flower VN
 ပစ္စည်း 100% polyester%အ၀တ်ကို ပွတ်တိုက်၍ ကြမ်းတမ်းစွာ လျှော်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။Unbleached-မှိန်တစ်ချောင်း whitening အေးဂျင့်မဆံ့မခံပါဘူးတဲ့ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ။ရဖို့အချိန်တစ်ရှည်လျားသောကာလ၏နှစ်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
border ribs off the shoulder T (short...
 Cotton 88%, 10% polyester 2% polyurethane  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Sweat dress (long sleeve)
 သုံးရာသီစလုံးဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးတော့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ တံဆိပ်ဖြစ်တယ် ။  အရှေ့ ဘက်တွင် အိပ် နှစ်ဘက်ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
by color blouson MQ
 ကုန်ပစ္စည်း : 97% polyester polyurethane 3%, အနံရိုးအဘို့ကို: 95% polyester, 5% Polyurethane အိတ်ကပ် ×2ရှေ့ဘက်တွင် ပါရှိပါသည်။  အ၀တ်ကို ပွတ်တိုက်၍ ကြမ်းတမ်းစွာ လျှော်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Sweat Maxi One Piece (Long Sleeve)
 hood sweat dress ဖြစ်ပါတယ်။  အရှေ့ ဘက်တွင် အိပ်ကပ် ၂ ဘက်ပါရှိပါတယ် ။  80% ဝါဂွမ်း, 20% polyester, နံရိုးအဘို့ကို: 95% ဝါဂွမ်း, 5% polyurethane  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Reversible Big MA-1 Jacket
 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာခလုတ်နှင့်အတူ) ×2ရှေ့တေ်၌ (လက်ဝဲ-ဇစ်နှင့်အတူ) စီတန်း, × 1 အင်္ကျီလက်  ပစ္စည်း 100% ဝါဂွမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
volume color knitted one piece (long...
 ဒီdress လေးဟာဆွဲသားဖြစ်ပြီးတော့ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ dress ဖြစ်ပါတယ် ။  MaterialAcrylic 80% ·နိုင်လွန် 20%  ဒီထုတ်ကုန်သည် အရောင် ရင့် ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ခြားအထည်များနှင့်ရော၍ရော်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Brafield Border Maxi One Piece
 bra မလိုဘဲ ၀တ်ဆင်ရတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Dress လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  Bra ကို အထဲ တွင်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့Fashion ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
denim flare skirt JN
 အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဂျင်းစကပ်ဖြစ်ပါတယ်။  ခါး၏ အပေါ် ပိုင်းတွင်ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ 100% ၀ါဂွမ်း ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ဘယ်ဘက်တွင် အဖွင့်အပိတ်ဇစ်ပါရှိသည်နှင့်အတူခါးတွင် ခါးပတ်ကြိုးကွင်းနဲ့ လက်ဝဲ လက်ယာ တွင် အိတ်ကပ်၂ခု ပါရှိပါသည်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Off-Shoulder Dolman blouse (Flower 70%...
 အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။  အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
French sleeve long TTS
 ဒူခေါင်းအောက် ထိ ရှည်တဲ့T shirt ပုံ စံ ဖြစ်ပါတယ်။  ၀တ်ရတာ အဆင်ပြေစေမဲ့ အကျီ် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။  ပါးလွှာ တဲ့ အကျီင်္ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။  ပစ္စည်း 100% ၀ါဂွမ်းဖြင့်ပြု လုပ်ထားပါတယ်။  ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ အရှေ့ ဘက်တွင် အိတ် ၂ခုပါရှိပါတယ်။ ဘယ်နဲညာဘက်တွင် အခွဲ ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
raffle bohemian blouse (70% sleeve) EC
 Material 98% ဝါဂွမ်း polyester 2%  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။  အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
V neck long T (short sleeve) TSB
 T-shirt ပုံစံ ၀တ်ဆင်နိုင်တဲ့ စကပ်အတို ဖြစ်ပါတယ်။  လည်ပင်းမှာ v ပုံ စံ ဖြစ်ပါတယ်။  ပါဝင်ပစ္စည်း ဘယ်ဘက်တွင်အကျီင်္ အိတ်ကပ်တစ် ခုပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
open shoulder T (short sleeves)
Long brushed Long full-zip hoodie...
 အရှေ့ဘက်တွင်ဇစ်ပါရှိတဲ့ ခေါင်းစွတ် ဦးထုပ် ပါ အနွေးထည်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။  ဆောင်းရာသီအတွက် ပြီးပြည့်စုံအောင်အနွေးဓာတ်ပေးမဲ့ အနွေးထည်ဖြစ်ပါတယ်။  ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ အရှေကဘက်တွင် ဇစ်ပါရှိပါတယ်။အရှေကဘက် ဘယ်နဲ့ညာတွင် အိတ်ကပ် ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
off the shoulder - blouse (Flower...
 ပစ္စည်း Rayon 82% ပိတျ 18%  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။  အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Bra Feel Slit Maxi Dress (Sleeveless)
 ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်တဲ့ dress ဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
(GU) fringe shoulder bag A
$14.82 $26.00 -43%
size ဒေါင်လိုက် 28 cm × အလျားလိုက် (အောက်ခြေ) 20cm , Machi: 17cm, ပခုံးအရှည်: ~ 128cm
Brafire bear top print Maxi one piece
 Bra ပါ တဲ့ dress ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  Bra-feel ပုံစံ ဖြစ်ပြီး သင့်၏Fashion ကို ပြောင်းလဲ ပြစ်နိုငါပါတယ်။ အပန်းဖြေ နေရာများကို သွားလျှင်ဝတ်ဆင်ရန်အတွက် အကြံပေးချင်ပါတယ်။  ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ Bra မလိုတဲ့ Dress ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Sweat maxi skirt JN
 စကပ် အရှည်ဖြစ်ပြီး ခါးsize ကိုလဲ ကြိုး ဖြင့် အတိုးအလျော့ ကို လုပ်လို့ရပါတယ် ။  အနောက်ဘက်တွင် ဘယ်၊ညာ အိတ်နှစ်ဖက် ပါရှိသည်။
GU Brand ကထုတ်တဲ့ကျောပိုးအိပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းအိတ်နှင့်အတူ, ပုခုံး 32 ×အနံ (အောက်ခြေ) 23 စင်တီမီတာ, (အပိုင်) မြင့်တက်: 10 စင်တီမီတာ, ပခုံးအရှည်: ~ 95 စင်တီမီတာ ၇ှိပါတယ်။
one handle shoulder bag
 ဒြပ်သားရေ, အိတ်အတွင်း၌သံလိုက်ဖြင့် ပိတ်ပစ်, ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ သံလိုက် ကြယ်သီးပါပါတယ် ။ဒေါင်လိုက်24 x ကိုအကျယ် (အောက်ခြေ) 18 စင်တီမီတာ, ပခုံးအရှည်: ~ 120 စင်တီမီတာ၇ှိပါတယ်။
Lap Jumper Dress (Sleeveless) CE
GU Brand ကနေပြီးတော့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးဝတ် အပေါ်ဖုံး dress လက်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခါးတွင် အတိုးအလျော့ပြု လုပ်လို့ရ တဲ့ သံကွင်း ပါရှိပါတယ် ။
Airy skipper shirt (long sleeve)
 Airy design ရှပ်အင်္ကျီ ဖြစ်ပါတယ်။ စကပ် (သို့) ဘောင်းဘီရှည်ဖြင့် ၀တ်ဖို့ အကြံပြု ချင်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Easy wrap gaucho pants EC
 သတ်မှတ်ချက် -အိတ်ကပ်: ရင်ဘတ်× 1 (လက်ဝဲ) ×2(လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ) တို့ရှေ့မှာနှင့်2×နောက်ကျော (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ)တို့ ပါရှိပါသည် ။  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။
ကုန်သွယ်ခြင်း အချက်ပြ - ကုန်ပစ္စည်းပေးပိုရန် နောက်ဆုံး ပေါ် ပစ္စည်းနှင့် စက်ရုံ သတင်းများကို သင်၏ inbox သို မှန်မှန်ဝင်ရောက်မည်။
တတိယ အဖွဲ့  အစည်းကို သင့်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ မျှဝေခြင်း မပြုလုပ်ရ။
 Feature Plan
© 2016 ProblemClean.com. All rights reserved